Unoda gweta rekuunganidza? Kubata Law & More
Mutemo wekuunganidza chikwereti
panguva yakatenderana. ”
Kune yega yega nzira yekuunganidza, nhanho dzinoverengeka dzinofanirwa kutorwa. Nhanho yekutanga ndeyekuzivisa iye anenge aine chikwereti kuti haasi kuzadzisa muripo wake wekubhadhara. Izvi zvinodaro nekuti iwe unofanirwa kumupa mukana wekubhadhara mukati menguva yakajeka pasina mamwe madhiri. Iwe unofanirwa kutumira uyo ane chikwereti chiyeuchidzo chakanyorwa kune izvi. Chiyeuchidzo ichi chinodaidzwa kuti chiziviso chekudairwa. Nguva yemazuva gumi nemana inowanzoonekwa senge nguva yakakodzera umo mukweretesi akakumbirwa kubhadhara chaanoda. Eheka, Law & More'magweta anogona kukuvarira chiziviso chekuda kuitika kwauri.
Kana iyo nzvimbo yeanonakidza isingakwanise kupedziswa nemubhadharo wechikwereti kana nehurongwa hwekubhadhara, matanho epamutemo anogona kutangwa. Izvo zvakare zvinokwanisika kuruka nhanho yeanonakidza uye kutanga matanho epamutemo nekukurumidza. Mudanho repamutemo, tinoti kubhadhara kwemari dzese dzakasarudzika uye mutengo wekuunganidza pamberi pedare. Matanho epamutemo asati atanga, zvinogona kutora zvinhu zvekweretesi. Izvi zvinonzi kusunga kwehana. Chisarudzo chakabatanidzwa chinoitirwa kuve nechokwadi chekuti mukweretesi haakwanise kufambisa famba dare risati ratonga, kuti iwe ugone kudzoreredza mutengo wako kubva kune uyo une chikwereti. Kana mutongi akapa mugove wako, chisungo chekuchengetedza chinoshandurwa chichibatanidzwa. Izvi zvinoreva kuti zvinhu zvakabatanidzwa zvinogona kutengeswa nehana nechaveruzhinji kana mukweretesi asati abhadhara. Mari inobuda pazvinhu izvi ichashandiswa kubhadhara chako. Law & More'Zvikwereti zvekuunganidza zvikwereti vane ruzivo mumunda wekubatanidzwa mutemo uye vanofara kukubatsira iwe panguva dzematare edzimhosva.